Suavecito Premium Blends Hair Pomade | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Suavecito - Premium Blends HAIR Pomade
--High Hold | High Shine | Hybrid Pomade--
သဘာဝအဆီဓာတ်များနှင့် အားဖြည့်ပေးမည့် ခေါင်းလိမ်းဆီ...
Suavecito Premium Blends HAIR Pomade သည် ကမ္ဘာကျော် လူကြိုက်အများဆုံး အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Suavecito - USA မှ Water Based နဲ့ Oil Based Pomade တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များကို ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားသော အဆီအမျိုးအစားခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
အလွန်အမင်းမာတောင့်ခဲသွားခြင်းမရှိသလို၊ အချိန်နေရာမရွေး ဆံပင်ပြန်ပြင်နိုင်ပြီး၊ ထိန်းအားကောင်းကောင်း High Hold မှ Strong Hold အထိပေးပြီး၊ ဆံသားကို High Shine နှင့် တောက်ပြောင်နေစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ဆံပင်ကိုပုံကျနေရုံသာမက ပြန်လည်အားဖြည့်တင်းပေးသော သဘာဝအဆီဓာတ်များနှင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသော ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
မာခဲစေခြင်းမရှိသော Hybrid Type အဆီအမျိုးအစား
ဆံသားကို ပြန်လည်အားဖြည့်တင်းပေးသော သဘာဝအဆီဓာတ်များပါဝင်ခြင်း
ထိန်းအားကောင်းကောင်း High Hold မှ Strong Hold အထိ
သဘာဝဆေးဘက်ဝင် Herbal ရနံ့
An American made hybrid hair product of water based and oil based that does not overly harden but with an all day high hold to strong hold andanatural medium shine, having the ability to restyle anytime anywhere without needing water. Formulated with many natural ingredients, this hair pomade will not only keep your hairstyle in check, it will also condition your hair.
Hair Conditioning Natural Ingredients
All Day High to Strong Hold